Shengxin Sports mihazona tanana amin'ny Youfa Group, ary ny tombontsoa mifameno sy mitady fampandrosoana haingana. - Sina Tianjin Shengxin Sports Goods
Shengxin Sports mihazona tanana amin'ny Youfa Group, ary ny tombontsoa mifameno sy mitady fampandrosoana haingana.
Noho ny tsy tapaka ny olona fanatsarana ny fari-piainana sy ny matanjaka hitsangana ny firenena hetsika Fitness, ny famokarana ny fanatanjahan-tena dia azo antoka fa ho tonga fitaovana ny fiposahan'ny masoandro orinasa, sy ny tsena toerana ho lasa bebe kokoa ny sakany. Ny tena vokatry ny Youfa Group, welded vy sodina, no tena fitaovana ho an'ny fanatanjahan-tena manta fitaovana. Izany dia nanohitra izany fototra izay Shengxin Fanatanjahan-tena sy Youfa Group dia nahavita soa aman-tsara ny fiaraha-miasa, miorina amin'ny fitsipiky ny fiaraha fifamenoana, fifanampiana soa sy ny fiaraha-mientana ifampizarana soa: Youfa vondrona vola tao Shengxin Fanatanjahan-tena sy manana fitantanana manokana amin'ny fitantanana manan-karena traikefa. Mba hanome ny toerana ho an'ny asa fanitarana, fantsona vy rehetra takiana amin'ny Shengxin Sports no novidina avy amin'ny sampan'ny orinasa ny Youfa Group.
Ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa io dia tsy afaka ho Shengxin Sports mba hanatanjahana ny tanjaka sy ny hery anaty hanatsarana ny fampandrosoana sy ny hampivelatra haingana. Izany ihany koa mafana fo sy mahasoa ezaka ny Youfa Steel Sodina Industry Chain hanitatra ambany sy hiditra ny fanatanjahan-tena fitaovana orinasa.
Post fotoana: Jul-19-2018